Umbiko weBelmont ubeka ukuthi isimiso soMthethosisekelo siqondisa ukusatshalaliswa kwemithwalo nemithwalo yocwaningo. Lokhu kungukuthi akufanele kube njalo ukuthi iqembu elilodwa emphakathini linalo izindleko zocwaningo kanti elinye iqembu livuna izinzuzo zalo. Ngokwesibonelo, ngekhulu leshumi nesishiyagalolunye nantathu leminyaka yokuqala, imithwalo yokusebenza njengezicwaningo zocwaningo lwezokwelapha yawela ikakhulukazi kwabampofu, kanti izinzuzo zokunakekelwa kwezempilo ezithuthukisiwe zavela ikakhulukazi kwabacebile.
Ngokwenza njalo, isimiso sezobuLungiswa ekuqaleni sahunyushwa ukuthi sisho ukuthi abantu abasengozini kufanele bavikeleke kubacwaningi. Ngamanye amazwi, abacwaningi akufanele bavunyelwe ukuphanga ngenhloso ongenamandla. Kuyindlela ephazamisayo ukuthi esikhathini esidlule, inqwaba yezifundo ezinengqondo ezihilelekile zabandakanya abahlanganyeli abasengozini kakhulu, kubandakanya izakhamizi ezingafundile nezingaxoshwa (Jones 1993) ; iziboshwa (Spitz 2005) ; izikhungo, izingane ezikhubazekile ngengqondo (Robinson and Unruh 2008) ; kanye neziguli ezibhedlela nezidala ezinokukhubazeka (Arras 2008) .
Kodwa-ke, ngo-1990, imibono yoBulungiswa yaqala ukuguquka ekuvikeleni ukufinyelela (Mastroianni and Kahn 2001) . Isibonelo, izishoshovu zithi izingane, abesifazane, kanye nezinhlanga ezincane ezidingekayo zidingeke ukuba zifakwe ngokucacile ekuvivinyweni kwemitholampilo ukuze lezi zinhlangano zizuze ngolwazi oluthola kulezi zivivinyo (Epstein 2009) .
Ngaphandle kwemibandela mayelana nokuvikelwa nokufinyelela, isimiso soBulungiswa sivame ukuhunyushwa ukuphakamisa imibuzo mayelana nesinxephezelo esifanele kubahlanganyeli-imibuzo ephikisana kakhulu emikhakheni yezokwelapha (Dickert and Grady 2008) .
Ukusebenzisa isimiso soBulungiswa ezibonweni zethu ezintathu kunikeze enye indlela yokuzibuka. Kukho okunye okufundiswa kwabahlanganyeli abahlawulwa ngokwezimali. Okunye kuphakamisa imibuzo eyinkimbinkimbi kakhulu mayelana nesimiso sezobulungiswa. Ngenkathi isimiso se-Beneficence singase siphakamise ukuthi singabandakanyi abahlanganyeli abavela emazweni anabo ohulumeni abacindezelayo, isimiso sezobulungiswa singaphikisana nokuvumela laba bantu ukuba bahlanganyele-futhi bazuze izilinganiso ezinembile zokucwaninga nge-intanethi. Icala Lokuthandana, Izibopho, Nesikhathi liphakamisa imibuzo ngoba iqembu elilodwa labafundi lithwale imithwalo yocwaningo kanye nomphakathi kuphela njengenzuzo yonke. Okokugcina, ngo-Contagion Emotional, abahlanganyeli ababephethe umthwalo wocwaningo babe yisampula esingahleliwe esivela emphakathini cishe ukuthi bazuze emiphumeleni (okungukuthi, abasebenzisi be-Facebook). Ngalokhu, umklamo wokuThuthukiswa koMzwelo wawuhambisana kahle nomthetho wezoBulungiswa.